Zipu ozi ịntanetị nke nwere ndebiri izizi site na iji MacOS Mail | Esi m mac
Zipu ozi izizi izizi jiri MacOS Mail
Ngwa ahụ mail na-edebe ihe nzuzo na-enye anyị ohere ịhazi ozi ịntanetị, n'ebumnuche nke izipu ozi ịntanetị edere na ndabere nke ejiri ihe onyonyo na ederede. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị ede ozi email ahụ na ndabere ọcha. Ọ bụrụ na ịmaghị ndebiri nke anyị nwere ike iji n'efu na MacOS Mail, ị na-efu ụzọ ị ga - esi kpọtụrụ ndị ana-akpọ gị n'ụzọ izizi. Ọrụ ndị ị nwere bụ: izipu ekele, mmemme ma ọ bụ mmemme dị ugbu a, zipụ edemede na foto etinyere na otu ndebiri, edemede nwere usoro izizi na obere ma ọ bụ dee n'ime akara (obi, ifuru ma ọ bụ trophies). N’isiokwu a ị ga-ama ebe ha nọ na otu esi eji ha.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ melite ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ Mac. Ya mere, iji nụ ụtọ nsụgharị ahụ, ị ​​ga-enwerịrị macOS Sierra 10.12 ma ọ bụ karịa. Mgbe ahụ ị ga-agbaso usoro ndị a:
Mepee Mail ngwa, ma melite akaụntụ email ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya.
Ugbu a ọ bụ oge dee ozi ahụ. Pịa na "Ikpehe ọhụrụ ozi."
Na email ị na-ede, achọtara n'akụkụ aka nri nke ụlọ elu ahụ, a bọtịnụ na folio edere n'ime na ị ga-pịa.
Mgbe ahụ ụdị, na-egosi na ala nke isiokwu. Pụrụ ịhụ otú, n'aka ekpe ị ga-ahụ edemede na aka nri gi i nwere ike ihu ihe omuma atu nke ha. Site na ịpị ha, ndebiri ahụ mepee ka ị nwee ike ịdebe ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, rụọ ọrụ na ya.
Ọ bụrụ na ndebiri ahọpụtara na-enye anyị ohere itinye foto, a na-etinye ha site na ịdọrọ ihe oyiyi ahụ na idobe na oghere echere maka ya.
Ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ. Naanị ihe anyị na-atụ uche bụ mmelite nke ndebiri site n'oge ruo n'oge. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ndebiri »dị ọhụrụ maka mbupu anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Zipu ozi izizi izizi jiri MacOS Mail
Enwere m MacBook macOS Mojave na nhọrọ template a pụtara na ozi mana ọ funyụrụ ma enweghị m bọtịnụ ahụ, m lere anya na ogwe ngwaọrụ ma ọ pụtaghị. You nwere ike inyere m aka ịtinye bọtịnụ a na Mac.
Ndewo, akara ngosi ahụ apụtaghị, olee otu m ga-esi mee?
Onye njikwa Clipboard, Theine na ngwa ndị ọzọ n'efu ma ọ bụ ọrịre maka obere oge